Pcb Bare Board, Pcb malefaka miovaova, Smt Pcb Assembly - Fumax
Famokarana miaraka amin'ny Fumax
Mikendry ny ho mpiara-miasa manamboatra elektronika azo itokisana indrindra any Shina izahay! Heverinay fa ny tetikasanay dia tetikasanay, ny orinasanao dia orinay. Miasa mafy be isan'andro izahay amin'ny fientanam-po sy ny matihanina mba hahombiazan'ny tetik'asa hahatratrarana ny fahafaham-po amin'ny mpanjifa avo indrindra.
Volavola miaraka amin'ny Fumax
Manolotra serivisy famolavolana marobe toa ny Electrical (PCBA), Serivisy momba ny injeniera mekanika ary rindrambaiko izahay. Ny ekipa mpamolavola anay dia vonona ny hiasa ao anatin'ireo mpiasa injenieranao amin'ny famolavolana mba hahatonga ny hevitrao ho vokatra tena izy!
Sarobidy nampian'i Fumax
Ambonin'ny serivisy OEM (manufacturing) ary ODM (endrika) tena tsara, Fumax dia manome serivisy fanampiny miampy sanda ho an'ny mpanjifanay ary manampy azy ireo hahatratra ny tanjon'ny orinasa.
Mitombo miaraka amin'i Fumax
Manampy ny mpanjifanay hampivoatra ny orinasany izahay. Na ny orinasam-pirenena marobe mitady ny fihenan'ny vidim-bokatra amin'ny vokatra efa misy na ny orinasa fanombohana te hanana ny hevitr'izy ireo haorina amin'ny vokatra vaovao, ny Fumax dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fandraisana anjara amin'ny fampiroboroboana ny orinasan'ny mpanjifantsika!
Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd. dia manolo-tena hanome famokarana fifanarahana elektronika (EMS) sy serivisy famolavolana vaovao ho an'ny mpanjifanay manerantany.
Hatramin'ny niorenan'ny taona 2007, Fumax dia manolotra vahaolana feno ho an'ny famolavolana sy ny injenieran'ny vokatra, ny fividianana fitaovana ary ny fividianana, PCB & PCBA (Fivoriamben'ny Birao vita pirinty), fananganana boaty (vala vita amin'ny plastika na vy), amin'ny famokarana trano (ozinina manana 100%) ary mandefasa entana sns
Ny mpanjifa mahafa-po dia ny zavatra rehetra eto amin'ny Fumax. Isika rehetra dia mieritreritra ny hihaona sy beyonging ilain'ny mpanjifa. Ny mpanjifa sambatra dia misy dikany lehibe ho antsika!
Ianaro ny fomba filazan'ny mpanjifa sy miresaka momba ny Fumax:
Noreen (mpitantana ny fividianana) & Kurt (talen'ny injeniera)
Niara-niasa tamin'ny Fumax izahay nanomboka tamin'ny taona 2014. Nisafidy an'i Fumax izahay taorian'ny fitsidihanay ny orinasa roa tany Shenzhen. Ny orinasa Fumax dia nandany ny fanaraha-maso anay. Tena nahagaga anay ny fahaizan'izy ireo nanamboatra. Nandefa entana an'arivony izahay, ary tsy mbola nanana olana momba ny kalitao. Izahay dia afa-po fotsiny amin'ny fampisehoana Fumax. Manantena ny hiara-hiasa amin'ny Fumax izahay mandritra ny folo taona ho avy ...
Mikael Björnson (CEO, orinasa fanombohana ao Stockholm)
Tena liana amin'ny fihazonana fifandraisana tsara amin'i Fumax izahay, satria niainanay taminao fa tena marina, tsara kalitao ary - asa fanompoana ary tena nanampy anay tamin'ny dingana fampandrosoana. Tsy mora amin'ny maha vahiny anao ny mahafantatra izay mpanamboatra hatokisana anao, saingy nahatanteraka ny fanantenana rehetra ianao. Manoro anao ny olona fantatro aho amin'ny sehatra StartUp ao Stockholm izay mitady mpamokatra. Miarahaba an'i Mikael
Joe's (Tale mpitantana, orinasam-pianakaviana any Texas)
Tena tsy mampino ny zavatra nataon'i injeniera Fumax. Ny ekipanao dia namolavola & nanangana prototype miasa izay tena tadiavinay mihitsy. Afaka mampiseho ny mpanjifanay ara-potoana amin'ny vokatra tsara izahay. Mahagaga ry zalahy. Hanoro hevitra an'i Fumax aho amin'ny namana hafa izay maniry ny hamolavola sy hanamboatra serivisy.
Eric (Tale miasa ao Ohio)
Niara-niasa tamin'ny Fumax izahay nanomboka tamin'ny taona 2009. Fumax dia manatitra ireo takelaka elektronika sy fonosantsika plastika ara-potoana miaraka amin'ny kalitao tena tsara. Tsy manana olana amin'ny Fumax mihitsy izahay. Mitondra tetikasa vaovao bebe kokoa izahay. Fumax dia safidy voalohany indrindra amin'ny famokarana!
Ny sasany amin'ireo mpanjifanay: